Common zvinokanganiswa CNC machine centre servo hurongwa - China Changzhou Zhanhang International
Common zvinokanganiswa CNC machine centre servo hurongwa
Sezvatinoziva tese, ari machine centre servo kwava hurongwa rinopa simba kune muchina mudziyo. Pasina servo hurongwa machine centre, kuti workpiece haagoni kupatsanurwa. Naizvozvo, servo hurongwa zvikuru kukosha machine centre. Kana servo hurongwa rapera, yose machine kugadzirwa anofanira kurega. Nhasi, Xiaobian achasuma nevakawanda zvinokanganiswa machine centre servo hurongwa.
The machine centre servo hurongwa kukundikana modes zvinosanganisira aramu zviratidzo uye fiyuzi inovhuvhuta pamusoro pakukurumidza unit iri kusanganiswa kuzvidzora uye okuzvidzivirira kuti siyana kudzivirira kusvetuka haizoshandisi. Zvinoreva aramu chinoratidza kunosiyana-siyana pamwe pamasikiro pakukurumidza kudzora chikwata. Kazhinji, pane marudzi anotevera:
1. Kuyerera guru, achiita muchina chokushandisa aramu. A guru aramu ano kunoitika. Pane mikana zviviri pasi kwomuzvarirwo ezvinhu, kureva yakakura aramu ano kunokonzerwa zvaparadzwa uye dunhu pfupi iri rokuti simba nemotokari pamusoro CNC nokumhanya kudzora Unit machine centre.
2. High voltage achaita kukonzera muchina turusi okuzvidzivirira. Kune Kazhinji matatu zvingangoitika yakakwirira voltage okuzvidzivirira. Zvingava kuti CNC chiyamuro voltage of machine centre runopfuura 10% of yavose sezvavakatarirwa kukosha, kana kuti kuputira kuita kuti servo injini iri akafumuka, kana mukuru voltage kunokonzerwa mutsara machine centre uchishandisa nokukurumidza kudzora chikwata.
3, kuti voltage iri pasi, zvichiita muchina chokushandisa okuzvidzivirira, mukana yakadaro machine centre hariwanikwi chaizvo, izvi zvingaenzana mazano voltage idukusa 85 muzana yavose sezvavakatarirwa kukosha, kana kuti simba kubatana hazvina kunaka.
4. inofambiswa nzira yacho kuonekwa nokukurumidza raputsika uye aramu kunokonzerwa. Izvi ndizvo chenhema aramu, nekuti yendege haana dambudziko, uye pane dambudziko riri kuonekwa dzinovaka hurongwa. Vazhinji okuzvidzivirira kuitika vari kumhanya inofambiswa mutsara CNC servo injini yacho machine centre. Kuputswa kana kukonzerwa murombo kuonana ari kuonekwa dzinovaka mutsetse.
5. The kuchengetedzwa chinja zvaanopa simba kunotinyevera. Dziviriro chinja ane mudziyo kudzivirira muchina chokushandisa. Somuenzaniso, imwe voltage guru achapisa zvimwe zvinoumba uye mamwe matanho nechimbichimbi kuti hazvigoni raitungamirwa muchina chokushandisa. Kana izvi zvinhu zviri kusangana, kudzivirirwa chinja achapiwa kusashanda kuti ichengetedzwe kukuvara chazvo, rakafanana ngozi chemabhazi.
6. zadzisa aramu, mhaka zadzisa aramu ndechokuti CNC zvokuimba mutoro machine centre iri kanganisika, kana yokumusoro panogumira injini pari pamusoro pakukurumidza kudzora hadzisisina yakanyanya pasi. The zvachose magineti pamusoro zvachose magineti injini kuchaita kukonzera munhu zadzisa aramu. Kana injini yacho machine centre pasina akamedura iri idling, zvichava nyore kuzvitengesa noruoko kana tenderera nomubato, izvo zvinoreva kuti zvachose magineti iri vakanyarara chose.
7. fiyuzi pamusoro CNC nokumhanya kudzora Unit machine centre ikaridzwa kana redunhu mudariki nzendo.
Post nguva: Aug-10-2018